Burundi: Fihoarana ny fahasembanana mibadabada · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2019 6:29 GMT
Ny 22 Oktôbra, nakalazaina erantany ny Andro Erantany faha-17 natokana ho an'ny Mibadabada. Fotoana iray hampifantohana ny saina amin'ireo olona erantany mihoatra ny 70 tapitrisa misedra olana isanandro amin”ny fifandraisana. Tafita tanaty sehatra maro samihafa ireo olona miaina miaraka amin'ny fibadabadàna, toa an'i Winston Churchill, Napoléon Voalohany, Albert Einstein, Tiger Woods na Marylin Monroe. Kanefa, matetika io aretina io no lasa sàkana goavana ho an'ny fiainana andavanandron'ireo olona voany.
Afaka ihoarana ny fbadabadàna, saingy mila ezaka goavana be. Armel-Gilbert Bukeyeneza, Borondey mpanao gazety sady bilaogera, no mamaritra ny zavatra niainany ao amin'ny tranonkalany gbukeyeneza.mondoblog.org:
Tsy misy afa-tsy hirifiry, alahelo sy tahotra rehefa mba te-hiteny ianao ary ao an-tenda dia efa tapatapaka ny feo ka lasa hasinteny misaratsaraka no iafaràny. Izany ny tsy fahombiazana niainako nandritra ny 20 taona mahery. Indraindray mila 10 segondra aho, 30, na 1 minitra mihitsy aza mba hanononana fotsiny ny hoe « Neny ».
Mmmmmmm…indraindray aho nijanona fotsiny teo. Niaritra, nikapoka rindrina, nihodinkodina, nivadibadika, mba hanosika ilay hasnteny farany. Nahomby io indraindray, raha tsy izany kosa matetika.
Teo hatrany ireo namana tany an-tsekoly, tsy nandamina na inona na inona. Nihomehy ry zalahy, nanesoeso, matetika manapaka ahy raha mba hiteny aho, reraka amin'ireo tantarako tsy mety voatantara mihitsy hatramin'ny farany. Nitombo ny fahasorenana, ary tsy nitsahatra nibontsina ny tahotra hilaza hevitra…..
Toy ny hoe hanakenda ahy, sahala amin'ny takotra iray goavambe manarona ny fivelarako ao anatiko ao ny fibadabadàna. Ny zavatra mampihomehy : somary mipentsampentsana izay aho. Mety nandamina ny toe-draharaha raha toa ka mba toetra hafa no nananana. Ankoatra izany, noho ny fitiavana sy ny faharesendahatra, niditra tanaty klioba maro natao ho fandinihan-javatra sy fifanakalozana aho rehefa teny amin'ny anjerimanontolo. Tsy maintsy niteny, nikarakara kaonferansa, raha tsorina dia miatrika ny tena sy miatrika ny tahotro ary ny fahasembana«-ko». Nazava ny safidy : na miteny amin'ny tenako hoe “Badalela mibadabada aho, tena olana iray goavana be amin'ny fitenenana sy ny fifandraisana izay hanakana ahy mandritra ny fiainako manontolo” na tsy miraharaha io fibadabadàna io. Ilay safidy faharoa no noraisiko. Soa ihany aza. Foana ny tahotra. Tsy nitambesatra intsony ireo esoeson'ny manodidina, ireo fahasorenako, ary andro no nisaina dia tafavoaka tanteraka tamin'izany aho.